सुत्नु भन्दा पहिला यस्तो गर्नुहोस् — News of The World
Notice: Use of undefined constant is_single - assumed 'is_single' in /home/sansarnw/public_html/wp-content/themes/sansarnews/functions.php on line 47
प्रहरीद्धारा चितामा जलाउन लागेको शव बरामद
बेहुलीलाई दान गरेको सिन्दूर पोते बेहुलालाई फिर्ता
आगामी डेढ वर्षभित्र प्राधिकरणकै ८०० मेगावाट विद्युत्
वैदेशिक रोजगारी पछि…
बेसाहरा बनेका बराम परिवारलाई नाम्जुङ सेवा समाजको आर्थिक सहयोग
सुत्नु भन्दा पहिला यस्तो गर्नुहोस्
संसार न्यूज संवाददाताजेठ ५, २०७४
सुत्नु भन्दा पहिले दिनभरी भएका नकरात्मक कुराहरु नसोँच्नुहोस् । जस्तै आज उसले यस्तो नराम्रो भन्यो । उसले नराम्रो ग¥यो । सबैको दिमागमा यस्तो सोच आउँछ । बास्तवमा यस्तो सोच्नु तपाइको कुनै गल्ति होइन् । हाम्रंो समाजको संरचना नै यस्तै छ त्यसैले हामी यस्तो सोच्छौं ।
त्यसैले तपाइ सुत्नुभन्दा पाँच मिनेट पहिले नकारात्मक कुरा भन्दा पनि दिनभरी गरेका÷ भएका सकारात्मक कुराहरु सोच्नुहोस् । यसले तपाइको जिन्दगीमा धेरै फाइदा गर्दछ । राति जब तपाइ इन्टरनेट चलाएर सकेपछि सुत्न जानुहुन्छ त्यस समय पहिले तपाइ सिधा सुत्नुहोस् । दुईवटा हात पेटमाथि ल्याएर राख्नुहोस् । खुट्टा तनक्क तन्काउनुहोस् । त्यसपछि १० पटक गहिरो सास लिनुहोस् । अनि जीवनमा मेहनत र सकारात्मक सोँचबाट जे हासिल गर्न चाहानुहुन्छ त्यसलाई दिमागको चारैतिर चित्रित गर्नुहोस् । त्यतिबेला तपाइको दिमाग भित्र बाहिर दुवैतिर उर्जाले भरिएको हुन्छ । त्यतिबेला तपाइको दिमाग आफै आनन्द र शान्त भएको पाउनुहुनेछ । जतिबेला तपाइको दिमाग शान्त हुन्छ त्यतिबेला तपाइ सोच्नुहोस जीवनमा जे चाहानुहुन्छ । आफूमा प्रवाह भएको सकारात्मक उर्जा सबै त्यसैमा लगाउनुहोस् । अनि जे चाहानुहुन्छ त्यसको बारेमा सोच्नुहोस्, जबसम्म तपाइलाई निद लाग्दैन् ।
तपाइलाई जबसम्म निद लाग्दैन तबसम्म ती सबै सकारात्मक चीजहरुको बारेमा सोँच्नुहोस् ।
यदि तपाइ हरेक रात ती कुराहरुको बारेमा सोच्नुहुन्छ जो नहुनु थियो । ति परिरिस्थतिहरु जुन तपाइको जिन्दगीमा नआउनु पथ्र्यो । तर, तपाइ विस्वास गर्नुस् तपाइले जे नहोस् भन्नुहुन्छ त्यहि हुँदै जान्छ । यसले तपाइको सकारात्म सोँच भित्र प्रवेश गर्न रोकिरहेको हुन्छ । यदि तपाइको जिन्दगीमा केही राम्रो हुँदैछ भने त्यो पनि हुँदैन् । किनकी हामीमा नकारात्मक कुराले दिमाग भरिइरहेको हुन्छ । त्यसमा नयाँ अनि सकारात्मक कुरा प्रवेश गर्न नै पाउँदैन । तपाइको सोँचलाई नकारात्मक चिजले बाँधिरहेको हुनुहुन्छ । म दुःखी छु मेरो जीवनमा कुनै पनि राम्रो भएको छैन । तर, तपाइले त्यसलाई ठिक उल्टो यानी सकारात्मता तिर लैजानुहोस् । जे छ खुसी छु । म भाग्यमानी छु । आगामी दिनहरु राम्रो हुन्छ । रमाइलो हुन्छ । तपाइको यस्तो सोँच तपाइको जीवनको योजना परिवर्तन गर्न सक्छ । त्यसैले सकारात्मक सोच्नुहोस् । कसैको मन नदुखाउनुहोस् । जीवनमा जे पनि गर्नुहोस् सकारात्मक गर्नुहोस् ।
नकारात्मक सोँचलाई कहिले पनि हाबी हुन नदिनहोस् । यदि तपाइलाई भोली कुैन काम गर्नु छ वा त्यो जरुरी काम छ भने, के होला ? कसरी गर्नेहोला ? भनेर मनमा डर राख्नु भन्दा जे होला त्यो राम्रो होला भन्ने सकारात्मक सोँच राख्नुहोस् ।
जीवनोपयोगी टिप्स सम्बन्धित
अब यस्ता साथीलाई फेसबुकबाट बाई–बाई गर्नुस्
यसकारण हुन्छ दिमाग कमजोर
यसरी बच्नुहोस् नकरात्मक सोँच आउनबाट
थाहा पाइ राख्नुस् सफलता रोक्छ अल्छिपनले
यी चार राशीका मानिसहरु सबैभन्दा प्रभावशाली हुन्छन्